ဝင့်ပြုံးမြင့် မြန်မာပြန်တဲ့ တိမ်ယံသစ္စာ အပိုင်း ( ၃၆ ) | The Mandalay Gazette-Myanmar/Burma News Media Forum Network
Literature/Books » ၀င့်ပြုံးမြင့် မြန်မာပြန်တဲ့ တိမ်ယံသစ္စာ အပိုင်း ( ၃၆ )	20
၀င့်ပြုံးမြင့် မြန်မာပြန်တဲ့ တိမ်ယံသစ္စာ အပိုင်း ( ၃၆ )
Posted by အလင်း ဆက် on Jul 29, 2012 in Literature/Books | 20 comments
စိုးရက်ပ်ကို ဒုက္ခပေးထားတဲ့ တားလီဘန်ခေါင်းဆောင်က ဘယ်သူလဲ..
အောင်ဖြည်းဖြည်းချင်းလှည့်၍ လူအုပ်ကြီးကိုနှုတ်ဆက်သည်။ ကျွန်တော်တို့ရှိရာ
ဘက်ကိုလှည့်လာချိန်တွင် ထိုတာလီဘန် နေကာမျက်မှန်ဝိုင်းတပ်ထားသည်ကို
တွေ့လိုက်ရတော့၏။ ဂျွန်လင်နွန်တပ်သည့်နေကာမျက်မှန်နှင့် တစ်ထေရာတည်းတူ
”ဒီလူဖြစ်ရမယ်” ဟု ဖာရစ်ဒ်ဆိုသည်။
တတိယပစ်ကပ်ကားပေါ်မှချထားသော ကျောက်ခဲပုံဆီ နေကာမျက်မှန်
တာလီဘန်လျှောက်လာသည်။ ကျောက်ခဲတစ်လုံးကောက်ယူကာ ပရိသတ်ကိုပြသည်။
အသံများငြိမ်ကျသွားသည်။ တာလီဘန်ကောင်သည် ဘေ့စ်ဘောပစ်သူလို မတော်မတ
ရားကြည့်ပြီး ကျင်းထဲမှ မျက်လုံးစည်းထားသူကို ကျောက်ခဲဖြင့်အားကုန်လွှဲ
ပေါက်သည်။ ဂျိုစောင်းကိုထိသွားပြီ။ ကျင်းထဲမှအမျိုးသမီး၏အသံ ဝက်ဝက်ကွဲ
သွားသည်။ လူအုပ်ကြီးလန့်ဖြန့်ပြီး အားခနဲအော်သည်။ ကျွန်တော်မျက်လုံးစုံ
ပိတ်ကာ မျက်နှာကိုလက်ဝါးအုပ်ထားသည်။ ကျောက်ခဲတစ်လုံးပစ်တိုင်း ပွဲကြည့်
ပရိသတ်ထံမှ အားခနဲအော်သံထွက်ပေါ်လာသည်။ အသံများရပ်သွားသော် ပြီး
သွားပြီလားဟု ဖာရစ်ဒ်ကို ကျွန်တော်မေးသည်။ မပြီးသေးဟုသူဖြေသည်။ လူတွေ
လည်ချောင်းကွဲသွားပုံရသည်။ မျက်နှာကိုလက်ဝါးအုပ်ပြီး ကျွန်တော်ဘယ်လောက်
ကျွန်တော်မျက်လုံးပြန်ဖွင့်ကြည့်ချိန်တွင် ကျင်းထဲမှလူသည် သွေးနှင့်
အသားအပိုင်းအစများဖြစ်နေသည်။ ဂျွန်လင်နွန်မျက်မှန်နှင့် တာလီဘန်ကောင်သည်
ကျောက်ခဲကို လက်ထဲပစ်မြှောက်ဆော့ကစားရင်း ကျင်းအနီးဆောင့်ကြောင့်ထိုင်
နေသောလူကို ငုံ့ကြည့်နေသည်။ ဆောင့်ကြောင့်ထိုင်နေသူက ကျင်းထဲမှလူကို
နားကြပ်ဖြင့်ထောက်စမ်းသပ်ပြီး နေကာမျက်မှန်တာလီဘန်ကောင်ကို ခေါင်းရမ်းပြ
သည်။ လူအုပ်ကြီးခမျာ ညည်းတွားရုံသာ။
ပစ်ကပ်ကားနှစ်စီးပေါ် တစ်လောင်းစီပစ်တင်ကြသည်။ လူအချို့ ဂေါ်ပြားယူလာပြီး
ကျင်းကိုပြန်ဖို့၊ တစ်ယောက်က သွေးစီးကြောင်းကြီးပေါ် ဖုန်များကန်ထုတ်၍ဖို့
မိနစ်အနည်းငယ်အကြာတွင် ဘောလုံးသင်းနှစ်သင်း ကွင်းထဲပြန်ရောက် လာသည်။
ယနေ့ နေ့လည်သုံးနာရီတွင် ဂျွန်လင်နွန်နှင့်တွေ့ကြရန် စီစဉ်ပြီးဖြစ်နေ
သည့် မြန်ဆန်လွန်းသောချိန်းဆိုမှုကို ကျွန်တော်အံ့အားကြီးသင့်နေရပြီ။
ဖင့်နွဲမှု များကြုံရမည်။ မေးခွန်းများတသီတတန်းကြီး မေးမြန်းခံရမည်။
စာရွက်စာတမ်း စစ်ဆေးမှုပါလာမည်ဟု ကျွန်တော်မျှော်လင့်ထားခဲ့သော်လည်း
တရားမဝင်အလွတ်သဘောလုပ်နေကြသည်ဆို သောအချက်က ကျွန်တော့်ခေါင်းထဲဝင်လာသည်။
ဆွေးနွေးစရာရှိသည်ဟု ပြောလိုက်ရုံသာဖြစ်သည်။ ကြာပွတ်ကိုင်တာလီဘန်
ခေါင်းညိတ်ပြပြီး ကွင်းထဲမှ တာလီဘန်ကို ပက်ရ်ှထန်ဘာသာဖြင့်လှမ်းအော်သည်။
ထိုတာလီဘန်က ဘာသာရေး ဆရာနှင့်စကားပြောနေသော ဂျွန်လင်နွန်တာလီဘန်ဆီပြေး၍
သုံးဦးသားစကားပြော ကြသည်။ ဂျွန်လင်နွန်တာလီဘန် မော့ကြည့်ခေါင်းညိတ်ကာ
တစ်ခုခုပြောလိုက်သည် ကို ကျွန်တော်မြင်သည်။ ထို့နောက်ကျွန်တော်တို့ထံ
ကွင်းထဲမှတာလီဘန် သတင်း လာပို့သည်။
ဝဇီရာအက္ခဘာခန်ရပ်ကွက်ထဲမှ အိမ်ကြီးတစ်လုံး၏ ယာဉ်ဝင်လမ်းအတိုင်း ဖာရစ်ဒ်
စက်သတ်သည်။ ၁၅ လမ်း၊ သို့မဟုတ် ဧည့်လမ်း။ ကားအင်ဂျင်အေးကျသွား သော
နှစ်ဦးလုံးစကားမဆိုဖြစ်ကြ။ သော့ပေါက်ထဲရှိနေဆဲကားသော့ကို ဖာရစ်ဒ်ဆော့နေ
သည်။ ကျွန်တော့်အား တစ်ခုခုပြောဖို့ကြိုးစားနေမှန်း ကျွန်တော်တပ်အပ်ပြော
”ကျွန်တော် ကားထဲမှာထိုင်စောင့်နေရင် ပိုကောင်းမယ်ထင်တယ်။ ဒါဆပ်ရဲ့
ဖာရစ်ဒ်၏အသံထဲ တောင်းပန်သံစွက်နေသည်။ သူကျွန်တော့်ကိုမကြည့်။
”ကျွန်တော်ပေးတဲ့ပိုက်ဆံထက် ခင်ဗျားပိုလုပ်ပေးခဲ့တာပါ။ ကျွန်တော်နဲ့အ
အမှန်မှာ ကျွန်တော်တစ်ယောက်ထဲဝင်မသွားလို။ ဘာဘာ့ထံမှ ကျွန်တော်
အိမ်ရှေ့တံခါးဒိုင်းခနဲဖွင့်ပြီး သူတွေ့ချင်သူကို ချက်ချင်းတောင်း
ဆိုမည်မုချ။ ကျွန်တော် ကားပေါ်မှဆင်းပြီး မြင့်မားသောအိမ်ရှေ့ဂိတ်တံခါးဆီ
လှမ်းရပြီ။ လူခေါ်ဘဲလ်နှိပ်သော်လည်း အသံမကြားရ။ လျှပ်စစ်မီးပြတ်တောက်နေ
ဆဲ။ ဤသို့ဖြင့် တံခါးကိုထုရသည်။ သိပ်မကြာခင် တံခါးဟိုဘက်မှ ပြတ်တောင်း
ကားထဲထိုင်နေသောဖာရစ်ဒ်ကို ‘ပြန်လာမယ်’ ဟုကျွန်တော် ပါးစပ်လှုပ် ပြသည်။
လက်နက်ပါသော တာလီဘန်နှစ်ယောက် ကျွန်တော့်ကို ခေါင်းဆုံးခြေ
ဖျားစမ်း၍ရှာသည်။ ကျွန်တော့်ခြေထောက်ကိုပုတ်၍ ပေါင်ခြံကိုစမ်းသည်။ တစ်
ယောက်က ပက်ရ်ှထန်ဘာသာဖြင့်ပြောလိုက်၍ နှစ်ယောက်လုံးကျိတ်ရယ်ကြသည်။
ကျွန်တော်တို့ အိမ်ရှေ့ဂိတ်တံခါးမှဝင်လာကြသည်။ အစောင့်နှစ်ယောက်ခြံရံကာ
အသေအချာကိုက်ညှိထားသောမြက်ခင်းကို ဖြတ်လာကြသည်။ ဘေးနံရံတစ်လျှောက် တွင်
လှေကားထစ်နည်းနည်းတက်၍ အိမ်ကြီးထဲဝင်လာကြသည်။ အိမ်အလှ ပြင်ဆင်မှု
မည်ကာမတ္တလောက်သာရှိသည်။ ခန်းမနံရံပေါ်တွင် အရွယ်အစားကြီး လှသော
အာဖဂန်နစ္စတန်အလံကိုတွေ့ရသည်။ အစောင့်နှစ်ယောက်က ကျွန်တော့်ကို
အပေါ်ထပ်အခန်းတစ်ခန်းထဲခေါ်လာခဲ့သည်။ အခန်းထဲတွင် အစိမ်းရောင်ဆိုဖာနှစ်လုံး
နှင့် ဖန်သားပြင်ကြီးသောတီဗွီတစ်လုံးရှိသည်။ နံရံပေါ်တွင်
ဆုတောင်းခင်းကော် ဇောတစ်ချပ်။ ကျွန်တော့်အား ဆိုဖာပေါ်ထိုင်ရန်
အစောင့်နှစ်ယောက်က သေနတ် ပြောင်းဖြင့်အချက်ပြသဖြင့်
ကျွန်တော်ထိုင်ချလိုက်သည်။ အစောင့်များ အခန်းထဲမှ ထွက်ခွာသွားသည်။
ကျွန်တော်ခြေချိတ်ထိုင်သည်။ ခြေထောက်ပြန်ချသည်။ ချွေးပြန်လက်ဖဝါး
များကို ဒူးပေါ်တင်၍ထိုင်သည်။ ထိုပုံစံကစိတ်မအေးပုံများ ပေါ်နေမလား။
လက်နှစ် ဖက်ကိုဆုပ်သည်။ ထိုပုံစံပိုဆိုးသည်ဟုတွေးမိပြီး
လက်သာပိုက်ထားလိုက်သည်။ နားသယ်တွင် သွေးများတဒုန်းဒုန်းတိုးနေသည်။
ခေါင်းထဲ အတွေးများပလူပျံလျက်။ ကျွန်တော်ဆက်မတွေးချင်တော့။
ကျွန်တော့်ကိုယ်ထဲမှ ဆင်ခြင်တတ်သောအပိုင်း လေးက ဤလုပ်ရပ်သည်
ကျွန်တော့်ဇနီးနှင့် မိုင်ပေါင်းထောင်ချီဝေးသော ဤအခန်းထဲထိုင်နေရသည် က
မြေတိုက်ခန်းထဲရောက်နေရသည့်နှယ်။ ယနေ့မနက်တင် လူနှစ်ယောက်ကိုသတ်
ခဲ့သောလူသတ်သမားကို ကျွန်တော်စောင့်နေရသည့်အဖြစ်။ စိတ်ဖောက်ပြန်ခြင်း
သက်သက်။ အသက်သုံးဆယ့်ခြောက်အရွယ် စိုးရာယာ မုဆိုးမဖြစ်သွားဖို့ လက်တွေ့
ဆိုဖာဘေးတွင် ကော်ဖီစားပွဲရှိသည်။ ခုံခြေထောက်ကြက်ခြေခတ်ပုံ။
ကြက်ခြေခတ်နေရာတွင် သစ်ကြားသီးအရွယ် ကြေးဝါဘောစေ့မြှုပ်ထားသည်။
ထိုစားပွဲမျိုး ယခင်ကကျွန်တော်မြင်ခဲ့ဖူးသည်။ ဘယ်မှာများပါလိမ့်။ သြော်
… ပက်ရ်ှဝါလက်ဖက်ရည်ဆိုင်ကလေးကိုး။ စားပွဲပေါ်တွင်
နီမြန်းသောစပျစ်သီးတစ် ဇလုံ။ စပျစ်သီးတစ်လုံးဖြုတ်ပြီး
ပါးစပ်ထဲပစ်သွင်းလိုက်သည်။ ခေါင်းထဲက အသံတွေရပ်တန်းကရပ်ဖို့
ကိစ္စတစ်ခုခုထဲ နစ်မြုပ်သွားမှဖြစ်မည်။ စပျစ်သီးချို သား။
နောက်တစ်လုံးထပ်ဖြုတ်သည်။ နောင်ရက်ပေါင်းများစွာအတွက် ယခုစပျစ် သီးသည်
အခန်းတံခါးပွင့်လာပြီး စောစောကအစောင့်တာလီဘန်နှစ်ဦး အဖြူရောင်
အရပ်မြင့်မြင့်တာလီဘန်ကိုခြံရံ၍ အခန်းထဲဝင်လာကြသည်။ အရပ်မြင့်တာလီဘန် သည်
ဂျွန်လင်နွန်နေကာမျက်မှန်တပ်ထားဆဲ။ သူ့ကြည့်ရသည်မှာ ခေတ်သစ်
ကျွန်တော်နှင့်မျက်နှာချင်းဆိုင်တွင် သူနေရာဝင်ယူပြီး အတော်ကြီးကြာ
သည်အထိ သူစကားမပြော။ ဆိုဖာပေါ်လက်များဒရမ်ခေါက်၍ ကျွန်တော့်ကိုထိုင်
ကြည့်နေသည်။ အခြားလက်တစ်ဖက်တွင် စိမ်းပြာရောင်စိပ်ပုတီး။ အဖြူရောင်
ရှပ်အင်္ကျီပေါ်တွင် အနက်ရောင်ခါးပြတ်အင်္ကျီ ဝတ်ဆင်ထားပြီး ရွှေနာရီပတ်ထား သည်။
အားနေသောလက်တစ်ဖက်ကို လေထဲမြှောက်ကာ လေထဲလက်လှုပ်ရှားနေ ပုံသည်
မမြင်ရသောအိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်ကို ပွတ်သပ်ပေးသည်နှင့်တူနေသည်။ ရှပ်
အင်္ကျီလက်စများလန်သွား၍ လက်ဖျံပေါ်မှအမှတ်အသားများကို တွေ့လိုက်ရသည်။
ဂျွန်လင်နွန်တာလီဘန်သည် အခြားတာလီဘန်နှစ်ယောက်ထက် အသား ပိုဖြူသည်။
”ဆာလမ် အလီခန်” ဟုသူနှုတ်ဆက်သည်။
လက်နက်ကိုင်တာလီဘန်တစ်ယောက်အား ဂျွန်လင်နွန်လက်ယပ်ပြလိုက် သည်။
ရုတ်တရက်ကျွန်တော့်ပါးပြင် ဖျဉ်းခနဲဖြစ်ပြီး အစောင့်တာလီဘန်သည်
တခစ်ခစ်ရယ်ကာ ကျွန်တော့်မုတ်ဆိတ်တုကို မြှောက်ဆော့နေသည်။ ဂျွန်လင်နွန်
တာလီဘန်သွားဖြီးကာ ”ခုတလောငါမြင်ဖူးသမျှထဲမှာ အကောင်းဆုံးပဲ။ ဒါပေမယ့်
အခုလိုဖြုတ်လိုက်တဲ့နည်းလမ်းက ပိုကောင်းတယ်မဟုတ်လား။ ဒီတော့ …
ဒီကနေ့ပွဲ ကြည့်ကောင်းရဲ့လားဗျ” ဟုမေးသည်။
ပါးပြင်နာနာပွတ်ပြီး ”ပွဲဆိုတာဒါပေါ့” ဟုပြောလိုက်စဉ် ကိုယ့်အသံက
”လူထုတရားစီရင်မှုဆိုတာ အကြီးကျယ်ဆုံးပွဲပဲ၊ ငါ့ညီ။ ပြဇာတ်ဆန်တယ်။
သည်းထိတ်ရင်ဖိုလေး …။အကောင်းဆုံးကတော့ အုပ်လိုက်သင်းလိုက်ပညာပေးမှု
ဖြစ်နေတယ်” ဂျွန်လင်နွန်တာလီဘန်သည် လက်ချောင်းများကိုဖျတ်ခနဲရိုက်လိုက်၍
အစောင့်တစ်ယောက်က သူ့အတွက်စီးကရက်တစ်လိပ်မီးညှိပေးသည်။ ဂျွန်လင်နွန်
ရယ်သည်။ လက်များလှုပ်နေ၍ စီးကရက်ပြုတ်ကျတော့မလိုပင်ဖြစ်သည်။
”ဒါပေမယ့်ငါ့ညီက တကယ့်ပွဲမှကြည့်ချင်တယ်ပေါ့။ ၁၉၉၈ ခု၊သြဂုတ်လ တုန်းကသာ
မာဇာကို အတူပါလာရင်ကြည့်ရပြီ။ အဲဒါကမှပွဲ”
ဂျွန်လင်နွန်တာလီဘန်ထရပ်ပြီး ဆိုဖာကိုပတ်လျှောက်သည်။ တစ်ပတ်၊ နှစ်ပတ်၊
”တစ်အိမ်တက်ဆင်းပဲ။ ကြီးကြီးငယ်ငယ်ယောက်ျားမှန်သမျှ အကုန်ထွက်။
သူတို့မိသားစုရှေ့မှာတင် အကုန်ပစ်ချတယ်။ ကြည့်ကြစမ်းပါစေ။
ကိယ့်ကိုယ်ကိုယ် ဘာလဲဆိုတာ မှတ်မိသွားအောင်။ ကိုယ်နဲ့ဆိုင်တဲ့နေရာ
ဘယ်နေရာလဲဆိုတာ မှတ်မိသွားအောင်” တာလီဘန်အမောပင်ဆို့လာသည်။
”တစ်ခါတလေတော့လည်း တံခါးဖျက်ပြီးဝင်ရတယ်။ ငါ … ငါကတော့
ဘာမှမမြင်ရတော့တဲ့အထိကို ဆွဲတယ်ကွာ။” ဧရာမလျှို့
”ခန်းလုံးပြည့် ပစ်မှတ်တွေအလယ်မှာ ခင်ဗျားရပ်နေဖူးမှ ‘လွတ်မြောက်မှု’
ဆိုတဲ့စကားလုံးကို ခင်ဗျားနားလည်မယ်။ ကျည်ဆံတွေပျံချင်သလို ပျံစမ်းပါစေ၊
အပြစ်မရှိဘူး၊ နောင်တမရဘူး၊ ခင်ဗျားကိုယ်ခင်ဗျား ကောင်းမှန်း၊
သန့်စင်မှန်း၊ သိက္ခာရှိမှန်း သိနေတယ်။ ဘုရားရဲ့အမှုတော်ကိုထမ်းနေတယ်ဆိုတာ
သိနေတယ်၊ ဒါတကယ် ရင်ခုန်စရာကောင်းတာဗျ”
တာလီဘန်သည် စိပ်ပုတီးကိုမွှေးမွှေးပေးသည်။ မာဇာရီရှာရဖ်တွင် ဟာဇာ ရာများကို
အစုလိုက်အပြုံလိုက်သုတ်သင်ခဲ့ကြောင်း သတင်းစာထဲ စိုးရာယာပြ၍
”တစ်အိမ်တက်ဆင်းပေါ့ဗျာ။ ထမင်းစားချိန်နဲ့ ဘုရားရှိခိုးချိန်ပဲနားတယ်”
ဟု တက်ခဲ့ဖူးသော ဧရာမပါတီပွဲကြီးအကြောင်းပြောသလို တာလီဘန်သည် ထို
သူတို့မိသားစုတွေ တိတ်တိတ်ထွက်ဆွဲရင် သူတို့ကိုပါပစ်ရတယ်။ လမ်းပေါ်မှာ
အလောင်းဒီအတိုင်းထားတာဟာ ခွေးစားဖို့။ ခွေးဆိုတာ ခွေးသားပဲစားတယ်”
တာလီဘန်သည် စီးကရက်ကိုချေပြီး မျက်လုံးပွတ်သည်။
ကျွန်တော် ရုတ်တရက်အပေါ့သွားချင်လာသည်။ ထိုကိစ္စကျော်လွန်ပါစေ ဆုတောင်းသည်။
”လူတိုင်းဒီလိုပဲ မဟုတ်လား” ဟုတာလီဘန်ပြောသည်။ လက်နက်ကိုင်
”သူက ဒီမှာ … ခင်ဗျားဆီမှာရှိတယ်လို့ ကျွန်တော်နားလည်ထားလို့ပါ။
”မေးပရစေဦး … ငါ့ညီ အဲဒီဖာတိုင်းပြည်မှာ ဘာတွေလုပ်နေသလဲ။
မွတ်စလင်ညီအစ်ကိုတွေနဲ့အတူ ဒီမှာဘာကြောင့်မနေတာလဲ။ ဘာကြောင့်တိုင်းပြည်
ကျွန်တော့်ခေါင်းပူထွက်နေသည်။ ကျွန်တော်စဉ်းစား၍ရသမျှမှာ ထိုစကား
သာဖြစ်သည်။ တာလီဘန်သည် အစောင့်နှစ်ယောက်ထံလှည့်မေးသည်။
”မဟုတ်ပါဘူး၊ ဆပ်” ဟုနှစ်ယောက်လုံးပြုံး၍ ပြိုင်တူဖြေသည်။
တာလီဘန်၏မျက်လုံး ကျွန်တော့်ထံပြန်ရောက်လာသည်။ ပခုံးတွန့်ပြ သည်။
”သူတို့ပြောတော့ အဖြေမဟုတ်ဘူးတဲ့။ အမိမြေက ကိုယ့်ကိုအလိုအပ်ဆုံး
ခင်ဗျားကိုထောင်ချလို့ရတယ်။ ဒီအဖြစ်ကို ခင်ဗျားကြောက်သလား”
”ဒီလိုပဲဖြစ်ရမှာပေါ့” ဟုဆိုကာ တာလီဘန်သည် ဆိုဖာပေါ်ကျောမှီထိုင်
ကျွန်တော် စိုးရာယာအကြောင်းတွေးနေသည်။ ထိုအတွေးက ကျွန်တော့်ကို
ငြိမ်သက်စေသည်။ တာလီဘန် ဘာမှန်းမသိပြောသည်။
”ဒီကောင်လေးကို ကြည့်ချင်လားလို့မေးတာပါ။ ကြည့်မယ်မဟုတ်လား၊
ငါ့ကောင်လေးကို” နောက်ဆုံးစကားလုံးကိုပြောထုတ်စဉ် တာလီဘန်၏အပေါ်နှုတ်
ကျွီခနဲတံခါးဖွင့်သံနှင့်အတူ အစောင့်တစ်ယောက် အခန်းထဲမှထွက်သွား သည်။
ပက်ရ်ှထန်ဘာသာဖြင့် မာရေကြောရေပြောသံကြားရသည်။ ထို့နောက် ခြေသံများနှင့်
ခြေချတိုင်းမြည်သည့်ခြူသံ။ ရှာရီနောရပ်ကွက်မှ ဟက်ဆန်နှင့် ကျွန်တော်
သွားသွားကြည့်သည့် မျောက်လူကြီးကို အမှတ်ရမိသည်။ မျောက်ကြီး
တံခါးပွင့်လာပြီး စောစောကအစောင့်တာလီဘန် စတီရီယိုအသံချဲ့စက်ကို
ပခုံးထမ်း၍ အခန်းထဲဝင်လာသည်။ ထိုလူ့နောက်ပါလာသူကား ကြည်ပြာရောင်
ဆင်တူဖြစ်နိုင်စွမ်းကား သွက်သွက်လည်လုမတတ် …။ ရာဟင်ခန့်
ကောင်ကလေး၏မျက်နှာသည် သူ့အဖေမျက်နှာကဲ့သို့ပင် လမင်းကြီးလို
ဝိုင်းစက်နေသည်။ မေးစေ့ငုတ်တိုလေး၊ ခရုခွံနှင့်တူသော နားရွက်ကုပ်ကုပ်လေး
တစ်စုံ၊ ကိုယ်ဟန်ပါးလျ၊ ကျွန်တော့်ငယ်ဘဝက ပေါက်ဖော်ရုပ်ကလေး။ ဆောင်းတွင်း
ဆိုလျှင် ဖဲချပ်များနောက်မှပေါ်လာတတ်သော မျက်နှာကလေး။ နွေဆိုလျှင် အဖေ့
အိမ်ခေါင်မိုးပေါ် ခြင်ထောင်ထဲအတူတွေ့ရသော မျက်နှာကလေး။
ကောင်ကလေးကို ဂတုံးအပြောင်တုံးထားသည်။ မျက်တောင်ခြယ်ဆေး ဆိုးထား၍
မျက်လုံးများနက်မှောင်နေသည်။ ပါးပြင်သည် သဘာဝထက်လွန်သော
အနီစွေးစွေးအရောင်။ အခန်းအလယ်တွင် ကောင်ကလေးရပ်လိုက်သောအခါ ခြေ
ချင်းဝတ်မှခြူများ အသံတိတ်သွားသည်။ ကောင်ကလေး၏မျက်လုံးများ ကျွန်တော့်
ထံကျလာပြီးမှ အကြည့်လွှဲကာ သူ၏ဗလာခြေထောက်လေးများကို ကြည့်နေရှာ သည်။
အစောင့်တစ်ဦး ခလုတ်နှိပ်လိုက်၍ အခန်းထဲတေးသံလွှမ်းသွားသည်။ တာဘလာ၊
ဟာမိုနီယမ်တို့၏ ခိုညည်းသံ။ တာလီဘန်တို့၏သောတာရုံအတွက်ကမူ
ယုတ်မာရာမကျသောတေးသံ … တာလီဘန်သုံးဦး လက်ခုပ်ပင်တီးနေပြီ။
စိုးရက်ပ်သည် လက်မောင်းကိုမြှောက်၍ ကိုယ်ကိုဖြည်းဖြည်းချင်းလှည့် သည်။
ခြေဖျားထောက်၍ ခန္ဓာကိုယ်ကိုလှည့်လိုက်၊ ဒူးကိုခေါက်ချပြီး
ယိမ်းနေသောဦးခေါင်း၊ ကြမ်းပေါ်ဆောင့်ဆောင့်ချနေသော ခြေထောက်၊
တာဘလာ၏စည်းချက်နှင့်အညီ ချွင်ချွင်မြည်သွားသောခြူသံ … ကောင်ကလေး
အစောင့်နှစ်ဦး လက်ခေါက်မှုတ်၍ရယ်မောနေကြသည်။ အဖြူရောင်တာ လီဘန်သည်
ရာဂပြုံးပြုံး၍ တေးသွားအတိုင်း ဦးခေါင်းကို ရှေ့တိုးနောက်ငင်လှုပ် နေသည်။
ဆုံးတစ်ချက်ဆောင့်ချ၍ မွတ်နေသောခန္ဓာကိုယ်လည်း ဖြုန်းခနဲရပ်သွားတော့၏။
”ဟား ဟား … ဒါမှငါ့ကောင်လေး” ဟုတာလီဘန်ဆိုကာ စိုးရက်ပ်ကို
သူ့အနားလာရန်ခေါ်သည်။ စိုးရက်ပ်သည်ခေါင်းငုံ့၍ တာလီဘန်၏ပေါင်နှစ်ဖက်
ကြားတွင် မတ်တတ်ရပ်နေသည်။ တာလီဘန်က ကောင်ကလေးကိုသိုင်းဖက်ထားကာ
”တော်လိုက်တဲ့ ငါ့ရဲ့ဟာဇာရာကောင်လေး” ဟုဆိုသည်။ စိုးရက်ပ်၏နောက်ကျော
ကို ထက်အောက်စုန်ဆန်သပ်နေသည်။ ချိုင်းကြားထဲကိုစမ်းသည်။ အစောင့်တစ်
ယောက်က နောက်တစ်ယောက်ကို တံတောင်တွတ်၍ကျိတ်ရယ်နေသည်။ တာလီဘန် က
တာလီဘန်သည် ကောင်လေးကိုလှည့်လိုက်၍ ကောင်လေးနှင့်ကျွန်တော်
စိုးရက်ပ် ပခုံးပေါ်သူ့မေးစေ့တင်ထားသည်။ စိုးရက်ပ်သည်
”ငါအံ့သြနေတာ …” ဟုတာလီဘန်စကားစသည်။ တာလီဘန်၏နီရဲ သောမျက်လုံးများ
”ဒါနဲ့ ဘာဘာလူကြီး ဘာဖြစ်သွားလဲ”
ကျွန်တော့်မျက်လုံးနှစ်လုံးကြားထဲ တူနှင့်ထုလိုက်သောသူ့မေးခွန်း။ ကျွန်
ကျွန်တော့်ခြေထောက် များ အေးစက်ထုံထိုင်းသွားသည်။
သူရယ်သည်။ ”မင်းဘယ်လိုထင်လဲ။ မုတ်ဆိတ်တုတပ်လိုက်ရုံနဲ့ ငါက
မသိနိုင်တဲ့ကိစ္စငါပြော မယ်။ ငါကမျက်နှာတစ်ခုကို ဘယ်တော့မှမမေ့ဘူးကွ”
သူ့နှုတ်ခမ်းကို စိုးရက်ပ် ၏နားရွက်ပေါ်ပွတ်နေသည်။ မျက်လုံးများကတော့
ကျွန်တော့်ထံမှမခွာ။ ”မင်းအဖေ သေပြီလို့ကြားတယ် … ကျွတ် … ကျွတ် …
ငါကသူနဲ့အမြဲပြိုင်ချင်ခဲ့တာကွ။ ကြည့်ရတာ သူ့သားပျော့ညံ့ကလေးနဲ့ပဲ
တာလီဘန် နေကာမျက်မှန်ချွတ်လိုက်ပြီ။ ကျွန်တော့်မျက်လုံးများကို
အသက်ရှူကြည့်သော် မရ။ ကြိုးစားပမ်းစား မျက်တောင်ခတ်ကြည့်သော် မရ။
ယခုအခိုက်အတန့်သည် သဘာဝလွန်နေသည်။ မဟုတ်သေး။ သဘာဝလွန်ခြင်းမဟုတ်။
အဓိပ္ပါယ်မဲ့ခြင်း မည်၏။ ကျွန်တော်၏ဝင်သက်ထွက်သက်ကို ထိုးနှက်ပစ်လိုက်သည်။
သူ့အမည်သည် အနက်ရှိုင်းဆုံးနေရာမှ တဖြည်းဖြည်ြး<ွကတက်လာသည်။ ထိုအမည်ကို
ကျွန်တော်ထုတ်ဖော်မပြောလို။ ထုတ်ဖော်ပြောမိပါက ပဉ္စလက်ပြလိုက် သလို
သူပေါ်လာမည်စိုးသည်။ သို့သော်သူရောက်နေပြီ။ ကိုယ်တိုင်ကိုယ်ကျရောက် နေပြီ။
နှစ်တွေသည်လောက်ကြာပြီးမှ ယခုကျွန်တော်နှင့်ဆယ်ပေမကွာသော နေရာ တွင်
သူအမြိန့်သားထိုင်နေသည်။ ကျွန်တော့်နှုတ်ဖျားမှ သူ့အမည်လွတ်ထွက်သွား သည်။
အလင်းဆက် says: အဲ.။ စက်ရဲ့ ချို့ယွင့်မှုကြောင့်ပဲ..လား။ လိုင်းကြောင့်ပဲ.လားမသိ ။
ဘာစာမှ ကို ပေါ်မလာပါဘူး။
ခဏလေးစောင့်ကြပါဗျို့။
ဘာမှ ကို ပေါ်မလာပါလား။ ကယ်ကြပါဦး ။
စိန်ဗိုက်ဗိုက် says: နော်လဲ ဘာမှ မကြားရဘူး.အဲလေ..မမြင်ရဘူးခင်ည
မောင်ပေ says: ကျုပ်လဲ ဘာသားနဲ့ ထုထားတာမို့ 
မြင်ရမှာလဲ လို့ 
စိန်ဗိုက်ဗိုက် says: အူးဆတ်ကိုမေးကြည့်လေ…
ဘာလို့ လျှို့ ဝှက်စာတွေ တင်တာလဲလို့Was this answer helpful?LikeDislike 2571
အလင်းဆက် says: ကိုးကြိမ်မြောက် ….ကြိုးစား.အပြီးမှာ..
လက်လျှော့ လိုက်၇ပါပြီ .။
စာတွေကို… ကော်ပီ ဆွဲထားတာကနေ..paste လုပ်လိုက် ပြီး…
pub;…လုပ်လိုက်တိုင်း… ( edit ) လုပ်လိုက်တိုင်းမှာ…
ရှိနေတဲ့ စာတွေ..အားလုံး..တစ်လုံးမကျန်…ပျောက်ကုန်ပါတယ် ။
သူကြိးရေ… တားတားလည်း…. မတိတော့ဘူး။ ဘယ်လို လုပ်ရပါ့ ။
ဗိုက်ဗိုက်နဲ့ …..ဦးပေ..ရေ.. ဘယ်ယို လုပ်ရမယဲ…ဟင်..။
တားတားလည်း..လျှို့ ဝှက်စာ..တွေ..တင်တဲ့ သူ..ဖြစ်နေပြီ..နော် ။ အဟိ ။
ကဲ.. လက်လျှော့ လိုက်ပါပြီ..ခညာ..။ နောက်များမှ ပဲ..ထပ်..တင်ပါတော့မယ်….လို့ ။
တောင်းပန်ပါတယ် ။ တစ်လောကလုံး…ဗြောင်းဆန် နေတာပဲ.. ။
စိန်ဗိုက်ဗိုက် says: စာတွေကို ကွန်း မန့် မှာ ဖြည့်ပေးကြည့်ပါ
သဂျီးလာရင် ဖြည့်ပြီး ပြင်ပေး ပါလိမ့်မယ်.. ဆတ်ဆတ်ရေ
Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 2571
အလင်းဆက် says: သူကြီးရေ… ကြည့်လို့ လည်း..မမြင်နိုင်မယ့် အတူတူ…ဒီ ပိုစ့် နှစ်ခု ကို ဖျက်လိုက်ပါတော့နော် ။
ပြီးတော့….ကျွန်တော့်… မကျွမ်းကျင်မှုကြောင့်…ဆိုရင်..တောင်းပန်ပါတယ်..လို့။
တိမ်ယံ…. အပိုင်း 36 ကို..မနက်ဖြန်.မှ တင်ပြ ပါတော့မယ်..လို့ …
အလင်းဆက် says: Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 2571
အလင်းဆက် says: ဗိုက်ဗိုက်ရေ.. ဗိုက်ဗိုက် ပေးတဲ့ အကျန်..အတိုင်း
ကွန်မန့်ထဲမှာ..ရေးပြီး…. တင်လိုက်တာ.. မြင်တဲ့ အတိုင်းပါပဲ..။
အလင်းဆက် says: အဲ.. ကွန်မန့်ေ၇းတဲ့ စာကျတော့ ပေါ်တယ် ။
Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 8437
kai says: MS Notepad မှာကော်ပီကူးပြီးမှ.. အဲဒီကော်ပီကို.. ကော်ပီပြန်ယူ… ဒီထဲ.ပေ့စ်လုပ်ကြည့်ပါလား..
အလင်းဆက် says: သူကြီးရေ…
စာဖတ်သူများခညာ… တိမ်ယံသစ္စာ အပိုင်း ( ၃၆ ) ကို
သူကြီးမင်း… ရဲ့ လက်ထဲ……
၀ ကလေးပင် မကွက် ပဲ… အပ် လိုက်ပါပြီ..လို့ ..။
စောင့်မျှော် ဖတ်ရှုကြပါကုန်..လော့ …။
kai says: တင်ထားလိုက်ပါပြီ..
ကိုရင်အလင်းဆက်..တင်မရတာ.. Tag ကသိပ်ရှည်နေလို့..လို့ထင်တာပါပဲ..
ကြောင်ကြီး says: သဂျီးရေ တာလီဘန်တွေ ရွာထဲဝင်လာဗီ….။ သဂျီးကဒေါ်လက်ဆွဲလို့ အမြန်ဆုံးသာ ပြေးပေတော့။ သမီးဒေါ်လေးကို ကြောင်ကြီးလက် အပ်ထားခဲ့၊ သူ့ရှေ့ရေး တာဝန်ယူသည်…..။ ဂေဇက်ဗလီဆြာ မူလာကြောင်ကြီး
အလင်းဆက် says: ဦးကြောင်… ရေ
သူဂျီးက တာလီဘန်တွေ..ထက် ဦးကြောင်ကို ပိုကြောက်နေပါဦးမယ် ။ တားတားလည်း… သူဂျီးရဲ့ တမီးဒေါ်လေးကို စောင်…မ ကြည့်..ရှု..ချင်တာပေါ့ ။
ချစ်ယို့စတာ နော် ။
ချိတ် မချိုးနဲ့ ဂျ ။
shwe kyi says: အပိုင်း(36)ကို စောင့်မျှော်လျှက်ရှိကြောင်းပါ..။
shwe kyi says: ဟက်ဆန်အပေါ်မှာလူမဆန်ခဲ့တဲ့ကောင်မို့လား မုန်းစရာကောင်းလိုက်တာ။
ဖတ်ရင်းနဲ့ ဒေါသတွေထွက်လာတယ်။ အခုထိလူမဆန်တုန်းပဲ။
အလင်းဆက် says: သူကြီးမင်းခညာ… တင်ပေးထားလို့ကျေးကျေးပါ ။
နောက်တစ်ခါ..တင်ရင်…tag စာသားကို တိုတိုတုတ်တုတ်..ရေးပါ့မယ်..ခညာ့ ။
သူကြီးကို ကျေးဇူးတင်တဲ့ အနေနဲ့ 
တားတား…. လက်၇ှိစားနေတဲ့ဂျယ်လီ ထဲ.က နေ..တစ်ဝက်ခွဲပြီး… ကျွေးချင်ပါတယ် ။
သူကြီးမင်း..ဂျယ်လီ ကြိုက်လား..ဟင် ။ ပြိးတော့ တားတားကြိုက်တဲ့ပါဝါရိန်းဂျား..ဇာတ်ကားတွေရော.ကြိုက်လား..ဟင် ။ တိချင် လို့ ပါ ။
ဇာတ်လမ်းအပေါ် ဘယ်လောက် စိတ်ဝင်စား..နေလဲ..ဆိုတာ. သိသာ..နေပါပြီ..။
ဟက်ဆန်…ကို ယုတ်မာ ခဲ့သူ မှန်း..တန်းသ်ိနေပြီ..ဆိုတော့လေ…။
ဇာတ်လမ်းရှည်ကြီးတစ်ခုကိူ…. အခု ချိန်ထိ..တစ်ပိုင်းမကျန်… အားပေး ဖတ်ရှုလာကြတဲ့
ဥှီးပေ..တို့ရွှေကြည်တို့ …. နဲ အခြား စာဖတ်သူများ..
အားလုံ့းကို..ကျေးဇူးပါ..လို့။
မောင်ပေ says: ဂလားဒီးရေးတား ဇါတ်ကားထဲကအတိုင်း ကို သတ်ကြတာကလား
အလင်းဆက် says: ဟုတ်ပါ့ ။
Comments By Post``ရွာထဲမှာ ဆုံကြတာပေါ့´´ - Ma Ma - padonmarသန့်ချင်ယောင်ဆောင်ထားတဲ့မြို့ကြီးတစ်မြို့ အကြောင်း - Munetez - Ma Maအတိတ်က ခြေရာတွေပြန်ကြည့်ရအောင် - Ma Ma - အရီးခင်လတ်Comment မှာ လူစည်ချင်ရင် (ယတြာ) - Ma Ma - အလင်း ဆက်ရွာသူ/သားများ အတွက် - Munetez - Munetezနားစွန် နားဖျား ရပ်ကွက်...။ - Munetez - Munetezမိမိ ကိုယ် မိမိ ခိုးယူပေါင်းသင်းကြသူများ...။ - black chaw - black chawသဂျီးနောက်ကနေ ဘယ်သူထိုး who? - Ma Ma - အရီးခင်လတ်အဟံ ပထမံ - padonmar - natureမြေမျိုပျောက်ကွယ်ခြင်း - padonmar - အလင်း ဆက်အယ်ဒီတာ့သင်ပုန်း ( မေ ၂၀၁၃) - Munetez - kaiရပ်ကွက်မှသည် နိုင်ငံဆီသို. - kai - garudaသူကြီးနှင့်တကွ ရွာသူား အားလုံးသို့ ...အိတ်ဖွင့်ပေးစာ.... - kai - အလင်း ဆက်အိပ်ပျော်နေသူများ နှိုးရခက်သည် 。。。。。。。。。 - ရဲစည် - ရဲစည်(ခ)စောဖွပြေးကျွန်ုပ်ရောက်ရှိခဲ့သော ကျတ်တို့ဌာနီ - အလင်း ဆက် -etone၄ လရှည်ကြာ ရွာထဲမှာ - Ko chogyi - Mr. MarGaအတု - မောင် ပေ - အလင်း ဆက်ဘ၀မှာ ဘာအရေးကြီးဆုံးလဲဆိုတော့..... - မောင် ပေ - အရီးခင်လတ်လူစွန့်စားမြင့်ကျော်နှင့် ခေါင်းပြတ်နတ်ရုပ်တု (စ/ဆုံး) - မောင် ပေ - Mr. MarGaသူတို့ ရောက်လာကြတော့မည်၊ သတိသာ ထား - naywoon ni - kyeemiteရုပ်ရှင်ကြည့်ခြင်း - Mr. MarGa - kyeemiteအထူးတလည် ကျေးဇူး တင်ရှိခြင်း - Mr. MarGa - Mr. MarGaအမျိုး ဘာသာ သာသနာကို စောင့်ရှောက်ကြမယ် ဆိုရင် ဖြင့် - kai - ဦးဦးပါလေရာEast West Dental	PACE	Western Union	Category	Arts & Humanities
Top 10Yin Nyine Nway (77895 Kyats )intro (76971 Kyats )SP (70551 Kyats )naywoonni (67417 Kyats )zaylay (67079 Kyats )weiwei (66832 Kyats )cobra (62183 Kyats )fatty (61354 Kyats )Anzartone (59081 Kyats )MaMa (57941 Kyats )Top Posts & Pagesသင်ဇာဝင့်ကျော် နဲ့ မဟူရာ အလှ...